Ifulethi 1 Primsaue - I-Airbnb
Ifulethi 1 Primsaue
Nalbach, Saarland, i-Germany
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Joachim
Izindawo zokuhlala e-Primstal
Leli fulethi lamaholide lalisanda kwakhiwa ngo-2014 futhi liyisimanjemanje, liyasebenza futhi linempahla ethokomele. Isendaweni emaphakathi kakhulu futhi ifinyeleleka kalula futhi inikeza izindawo eziningi zokuvakasha kanye nezindawo zemidlalo.
Indawo yokuhlala ingafinyelelwa kalula futhi ngaphandle kwezinkinga futhi isendaweni ethule.
I-Saarland inikezela ngamathuba amaningi okuvakasha: indawo yamagugu omhlaba ye-Völklinger Hütte, indawo eyingqophamlando yesifunda i-Saarschleife, i-Roman Villa Borg kanye nenqwaba, izindlela ezimangalisayo zokuqwala izintaba e-Litermont ngezinye zezinto ezimbalwa ezibukwayo.
Abathandi bezemidlalo nabo abaphuthelwa yi-Nalbach: ithenisi nokuqwala izintaba, ibhola legalofu namapaki okugibela, amathempeli ezempilo nama-saunas, amachibi okuzijabulisa, amachibi angaphandle namachibi okugeza anikeza amathuba okukhipha umusi. Bese kuthi amathuba amaningi okuthenga, izinxanxathela zezitolo namadolobha amadala anomlando njenge-Saarlouis ne-Saarbrücken bakumeme ukuthi uhambe, ubambezele futhi ujabulele.
Hlola ezinye izinketho ezise- Nalbach namaphethelo